Kandidà Rajoelina: « Na maro aza ny mpanaratsy, tsy maintsy mandroso isika » | NewsMada
Kandidà Rajoelina: « Na maro aza ny mpanaratsy, tsy maintsy mandroso isika »
Ambositra sy Antsirabe ary i Morondava indray ny nanohizan’ny kandidà Rajoelina ny fampielezan-kevitra, ny faran’ny herinandro teo.
« Na maro aza ny mpanaratsy, tsy maintsy mandroso isika. Betsaka ny tetikasa hataontsika hampandroso ny firenena. Tsy mitovy na ny fitiavan’ny olona na ny fahavitrihana amin’ny famoriam-bahoaka. Maro ny kandidà fa iray ihany ny afaka hanavotra ny firenena. Mila filoha tanora i Madagasikara”, hoy izy. Nanteriny fa tsy mba tia manao kabary ambony vavahady ny tenany. Hotanterahina avokoa ny ambara rehetra. “Ny sasany, mandainga fa isika tsy mba tahaka izany. Isika tsy mpamadika fa ny hafa izany”, hoy ihany ny kandidà laharana faha-13. Nambarany ho anton’ny filatsahany ny fahantran’ny vahoaka sy ny hitondrana ny fampandrosoana. Tsy an-tanàn-dehibe fa hatrany ifotony izany. “Aoka izay ny fampanantenana poakaty sy ny famitahana vahoaka”, hoy ny mpanorina ny IEM. Nohitsiny fa mila olona matanjaka sy mavitrika ny mitantana ny firenena.
Samy nampanantenainy ny fandaharanasany sy nitondrany vahaolana avokoa ireo distrika telo notsidihiny ireo. Anisan’izany ny fanamboarana kianja manara-penitra, ny fametrahana informatika manomboka any amin’ny EPP, CEG, lycée. Ny handravana ny Antenimierandoholona ka hananganana oniversite ao Antsirabe ny volan’io Andrimpanjakana io. Ny fampitaovana sy fanohanana ny mpanao asa tanana ao Ambositra.
Hanorina tanàna vaovao…
Ny fametahana “puce” ny omby hanaraha-maso izany miaraka amian’ny fametrahana vondron-kery manokana hiady amin’ny dahalo ary ny hividianana angidimby miisa 10. Ho tonga koa ny “drones”… Ny fampidinana ny vidin-jiro sy ny hanampiana ny mpamboly sy ny mpiompy. Manampy ireo ny fanorenana trano ho an’ny tanora sy ny tantsaha na koa ny mpivady, haloa tsikelikely amin’ny vidiny 1 hetsy ka hatramin’ny 2 hetsy ariary anatin’ny 15 na 20 taona. Ny fanorenana tanàna vaovao… Tsy hadinony ny fanamboaran-dalana ho tohin’ny efa vitany fony fitondrana Tetezamita. Ny hamahana ny olan’ny rano ao Dabaraha any Morondava. Ny hampiofanana ny tanora eo amin’ny fiompiana sy fambolena…
“Filoha hitsinjo ny vehivavy, ny tanora, sy ny vahoaka marofy aho ary hijery ny Malagasy tsivakivolo. Efa voasoratra ny zavatra rehetra ary tsy misy zavatra kisendrasendra amin’ny fiainana”, hoy ny kandidà Rajoelina.